Kedu ihe bụ API, REST, SOAP, XML, JSON, WSDL na nkọwa ndị ọzọ
Mgbe ị na-eji ihe nchọgharị gị, ihe nchọgharị gị na-arịọ maka ihe nkesa ndị ahịa na ihe nkesa na-eziga faịlụ ndị nchọgharị gị gbakọtara ma gosipụta ibe weebụ. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ihe nkesa gị ma ọ bụ ibe weebụ gwaa ihe nkesa ọzọ? Nke a ga - achọ ka ị tinye koodu na API.
Kedu ihe API kwụrụ maka?
API bu ihe acronym maka Ngwa ihe mmemme. An API bụ usoro nke usoro, usoro iwu, na ngwaọrụ maka iwulite ngwa weebụ yana ngwa ngwa. Na API ezipụta otú ị pụrụ isi gosipụta (nhọrọ), rịọ ma nata data site na API nkesa.
Kedu ihe API?
Mgbe e jiri ya mee ihe na mmepe mmepe weebụ, otu API bụkarị usoro akọwapụtara ozi Hypertext Transfer Protocol (HTTP), yana nkọwa nke usoro nke ozi nzaghachi. API API na-enye ohere ka njikọta ọtụtụ ọrụ banye na ngwa ọhụrụ akpọrọ mashups.Wikipedia
Nkọwapụta vidiyo nke Ihe API na-eme
Enwere usoro nkwekọrịta abụọ dị mkpa mgbe ị na-emepe API. Asụsụ mmemme mmemme dị ka Microsoft .NET na ndị mmepe Java na-ahọrọkarị SOAP mana protocol kachasị ewu ewu bụ REST. Dị ka ị pịnyere adreesị na ihe nchọgharị iji nweta nzaghachi, koodu gị nyefere onye na-arịọ arịrịọ API - n'ụzọ nkịtị ụzọ na sava na-enyocha ma zaghachi n'ụzọ kwesịrị ekwesị na data ị rịọrọ. Nzaghachi maka SOAP na-aza XML, nke dị ka HTML - koodu nke ihe nchọgharị gị na-eji.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale API na-enweghị ide akara nke koodu, DHC nwere nnukwu Ngwa Chrome maka mmekọrịta na API ma hụ nzaghachi ha.
Kedu ihe Acronym SDK na-anọchi anya?
SDK bụ ebumpụta aha Akụrụngwa Onye Mmepụta Software.
Mgbe ụlọ ọrụ na-ebipụta API ha, enwere ihe edekọtara akwụkwọ yana egosi otu API nyochaa, otu esi acho ya, na ihe nzaghachi kwesiri. Iji nyere ndị mmepe aka ịmalite, ụlọ ọrụ na-ebipụtakarị a Akụrụngwa Onye Mmepụta Software ịgụnye klaasị ma ọ bụ ọrụ ndị dị mkpa n'ụzọ dị mfe n'ime ọrụ onye nrụpụta na-ede.
Kedu ihe Acronym XML na-anọchi anya ya?
XML bu acronym maka asụsụ nhụbàràama nketa. XML bụ asụsụ akara ngosi eji edepụta data n'ụdị nke mmadụ nwere ike ịgụta na igwe akụrụngwa.
Nke a bụ ihe atụ nke otu XML si apụta:
<?xml mbipute ="1.0"?>
Kedu ihe Acronym JSON na-anọchi anya ya?
Nke a bụ ihe atụ nke data n'elu iji JSON:
"aha": "Ngwaahịa A",
"nkọwa": "Ngwaahịa mbụ",
"kwa": "nke ọ bụla"
Kedu ihe Acronym REST pụtara?
REST bu ihe achoro maka Nnọchiteanya Ọchịchị na-anọchite anya ụdị ụlọ maka usoro hypermedia kesara. Ya mere aha ya bụ Roy Thomas Fielding
Whew… miri emi! I nwere ike ịgụ ihe niile akwukwo ebe a, nke a na-akpọ Architectural Styles na Design of Network Architectures nke dabeere na Network nyefere na afọ ojuju afọ nke ihe achọrọ maka ogo Dọkịta PHILOSOPHY na Ozi na Science Science site Roy Thomas Fielding.
Daalụ Dr. Fielding! Gụkwuo banyere REST na Wikipedia.
Kedu ihe Acronym SOAP na-anọchi anya ya?
SOAP bụ utu aha Obere Nweta Nnweta protocol
Abụghị m onye mmemme, mana n’uche m ndị mmepe hụrụ SOAP n’anya na-eme nke a n’ihi na ha nwere ike imepe koodu n ’ụzọ dị mfe n’ ọhụhụ mmemme mmemme nke gụrụ faịlụ Nkọwa Okwu Ọrụ Weebụ (WSDL). Ha ekwesighi ịkọwapụta azịza ya, iji WSDL emezuola ya. SOAP chọrọ envelopu mmemme, nke na-akọwa usoro ozi na etu esi ahazi ya, usoro nke koodu ngbanwe maka igosipụta oge nke usoro datatypes akọwapụtara na mgbakọ maka nnọchite usoro oku na nzaghachi.
Feb 9, 2017 n’elekere 2:35 nke abali
Daalụ maka nkọwa ndị a bụ isi.
Sep 26, 2017 na 11: 33 AM
Nke a dị ukwuu na-ekele gị sir maka ozi a.
Disemba 6, 2017 na 1:13 mgbede
Enwere m ekele na ị biputere ozi a - Anọ m na-eche ihe REST pụtara ogologo oge! 🙂
Disemba 13, 2020 na 6:44 mgbede
N'ikpeazụ (n'ikpeazụ!) Nchịkọta nkenke nke ihe okwu mkpọ okwu ndị a niile na-atụ egwu na mbụ pụtara. Daalụ maka iji asụsụ doro anya na nke kwụ ọtọ, results = ọdịnihu ga-adị ka nke ọma maka onye nrụpụta nwata akwụkwọ a.
Disemba 14, 2020 na 3:40 mgbede
Ndewo Vic, ee… ekwere m. Okwu ndị a na-atụ egwu. M na-echeta oge mbụ m mere arịrịọ API wee pịa ya niile na enweghị m ike ikweta na ọ dị mfe n'ezie. Daalụ!